Waa kuma George Weah, madaxweynaha cusub ee Liberia? - Ceelhuur.com | Ceelhuur.com
Home » Wararka Dibadda » Waa kuma George Weah, madaxweynaha cusub ee Liberia? Date :December 30, 2017 Author :Cali Yare 6 views
Weah ayaa waxaa halkan geeyay waalidkiis si uu ula noolaado ayaydiis, xiligaas waalidkiis waxa ay ku noolaayeen degmada Grand Kru oo ah meelaha ugu faqrisan. Taariikhdaas faqrinimada ayaa taageerayaashiisa agtooda uu uga noqday qof halyay ah oo aad u dadaalay.
Balse waligiis ma uusan halmaamin dalkiisii hooyo, kaas oo markaas ku jiray dagaal sokeeye oo ay ku dhinteen dad gaaraya 250,000 qof. Mararka qaarkood jeebkiisa ayuu lacagta ka bixin jiray si xulka qaranka Liberia ay ugu safraan ciyaaraha dibedda.
Waxyaabahan yaryar ee uu sameeyay ayaa aad loo xusuustaa illaa iyo maanta. Mar ayuu noqday danjiraha hay’adda carruurta adduunka ee UNICEF, wuxuuna ka qeybqaatay arrimaha samofalka.
Madaxweynihii hore ee Liberia Charles Taylor ayaa mar uga shakiyay in uu doonayo kursigiisa madaxnimo kadib markii uu Weah diiday in uu ookiyaalka iska bixiyo xili labada nin ay kulmayeen.Malaha taas waa uu ku saxnaa Taylor, Mr Weah ayaa sameeyay xisbiga CDC waxyar ka hor doorashooyinkii 2005-tii.
Sanadkii 2014-kii ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan Aqalka Sare ee Liberia, isaga oo kasoo galay gobolka Montserrado oo ay qeyb ka tahay magaalada caasimadda ah ee Manrovia. Isla sanadkaas ayuu u tartamay madaxweyne ku xigeenimada Liberia, balse kuma uusan guuleysanin.